BRCCA အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ဖိတ်ကြားခြင်း
စက်တင်ဘာ ၂၇ (ရေတာရှည်) ====================================== စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့၊ နံနက်(၀၈:၁၈)အချိန်က ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဝင်းသိန်း၊ ရေတာရှည်မြို့နယ် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာတင်တင်ဝင်းနှင့် မြို့နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများ လိုက်ပါလျက် ရေတာရှည်မြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ ရောက်ရှိပြီး မြို့နယ်ဆရာဝန်များနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး၊ ဆေးရုံအတွင်းဘက်နှင့် အပြင်ဘက်များသို့ လှည့်လည်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီး ဆေးရုံတက်လူနာများကို အားပေးစကား ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သစ်မွှေးစိုက်ပျိုး၊ ထုတ်လုပ်၊ ရောင်းချခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်
စက်တင်ဘာ ၂၆ (ပဲခူး) ========================== စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့၊ နံနက်(၉)နာရီအချိန်က ပဲခူးမြို့၊ ဥဿာကျော်ဟိုတယ်၌ သစ်မွှေးစိုက်ပျိုးခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း နှင့် ပတ်သက်သည့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်သည်။ ရှေးဦးစွာ ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဦးကျော်မင်းစံက အဖွင့် အမှာစကားပြောကြားပြီး၊ တက်ရောက်လာကြသူများမှ သစ်မွှေးစိုက်ပျိုး၊ ထုတ်လုပ်၊ ရောင်းချခြင်းနှင့် ပြည်ပသို့တင်ပို့ရောင်းချခြင်း လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ အခမ်းအနားသို့ တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် ဌာနဆိုင်ရာများ၊ သစ်တောဦးစီးရုံးချုပ်နှင့် ပဲခူးခရိုင်နှင့် တောင်ငူခရိုင်မှ အရာထမ်းများ၊ သစ်မွှေးလုပ်ငန်းရှင်များ ၊ စိတ်ပါဝင် စားသူများ စုစုပေါင်း (၂၂)ဦး တက်ရောက်ကြသည်။ အဆိုပါအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသည် သစ်မွှေးပင်စိုက် ပျိုးခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း ဆောင်ရွက်ရာ တွင် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရန် နိုင်ငံတကာမှ သတ်မှတ်ထားသည့် …
စက်တင်ဘာ ၂၅ (ပဲခူး) ============================ စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့၊ မွန်းလွဲ(၂)နာရီအချိန်က ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ တော်ဝင်ဟံသာအစည်းအဝေးခန်းမ၌ ပဲခူး-ဟံသာဝတီ-ရန်ကုန်အနောက်တောင်ပိုင်း လမ်းကွန်ယက် နှင့် မြို့ပြစီမံကိန်းအသစ်များ အကောင်အထည်ဖော်ရေးဆွဲပြီးစီးမှုအား ကိုရီးယားနိုင်ငံ KOICA မှ Mr. Arm ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှ လာရောက်ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။ ရှေးဦးစွာ Mr. Arm က စီမံကိန်းရေးဆွဲထားရှိမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ဦးစားပေးကဏ္ဍများနှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ စသည်တို့ကို တင်ပြပေးသွား မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ပဲခူးဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် စီမံကိန်းရေးဆွဲရာတွင် ၂၀၄၀ တွင်ဖြစ်ပေါ် လာမည့် လူဦးရေ၊ စက်မှု/လက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍများ၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေး စသည့် အခြေခံအချက်အလက်များကို ထည့်သွင်းရေးဆွဲရပါကြောင်း၊ ပဲခူးတိုင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ရေးအရ လမ်းဆုံမြို့နေရာဖြစ်ပြီး ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးများနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိပါ ကြောင်း၊ ဒီစီမံကိန်းအား Y ပုံစံဖြင့် ရန်ကုန်တောင်ပိုင်း၊ …
Page 237 of 349« First...210220230235236237238239»240250260...Last »